Sida loo dejiyo Koontada PayPal
PayPal waa adeegga ugu caansan ee 'nin dhexda' ah ee iibsashada internetka . Halkee MoneyGram iyo wareejinta xawaaraha waxay ahaayeen qarnigii qarniga 20aad, maantadan 170 milyan oo ka mida dadka isticmaala internetka waxay u jeedaan PayPal inay lacag u diraan email kasta.
Waa maxay lacagta dhabta ah?
PayPal ee bilowga ah. Grill / Getty
Tan iyo markii ay bilaabantay 1998, PayPal waxay noqotey hab sahlan oo lagu kalsoon yahay oo lagu iibsado lacag online, in ka badan 45% iibsiyada eBay waxay marayaan PayPal. Qiyaastii $ 7000 ayaa isbeddelay mar labaad oo ka mid ah maalintiiba iyadoo loo marayo PayPal.
Maxay tahay sababta PayPal Popular Popular?
PayPal waxay leedahay saddex faa'iido weyn:
Waxaa si ballaaran loo isticmaalaa, sidaa daraadeed waxaa jira aqoon iyo xoog badan oo ku saabsan adeegga PayPal.
Waa mid aad u sahlan, sida aad u baahan tahay inaad ogaato waa cinwaanka emailka qofka.
Wuxuu qariyaa macluumaadka kaararka bangiga iyo credit card ee dhinaca kale.
Sida PayPal u shaqeyso
PayPal waxay dadka u ogolaanaysaa inay lacag u diraan cinwaannada emailka ee kale iyadoo isla markaaba qarinayaan kaararka deynta iyo macluumaadka bangiga. Tani waxay ku haboon tahay in alaab ka soo iibsato shisheeye , iyo in lacag lagu wareejiyo shakhsiyaadka kale ee gaarka loo leeyahay.
Sidoo kale adeegga sirta ah, PayPal waxay u dhaqmaan sida hanti-bixiyaha lacagta. Iyadoo loo marayo siyaasadeeda, xirfadaheeda, iyo hufnaanta ganacsiga, PayPal waxay kasbatay kalsoonida labada dhinac. PayPal waxay fulisaa damaanad qaadka si labada iibsade iyo iibiyeyaashu ay hubiyaan in lacagtooda ama alaabadooda la soo celin karo haddii ganacsigu dib u soo noqdo. Tani waa siyaabo aad ku kalsoonaan karto PayPal inaadan aheyn goob khiyaamo ah .
Inta badan dhammaantood: labada dhinacba waxay iska ilaalin karaan waraaqaha si toos ah ula dhaqma bangiyada iyo bixiyayaasha kaararka deynta.
Ma jiraan wax shardi ah tiknoolajiyada khaaska ah ama liisanka ganacsiga si loogu diro ama loo siiyo lacagta Paypal. Waxaad u baahan tahay oo keliya waxyaabaha soo socda:
Cinwaanka emailka saxda ah.
Kaarka amaahda ama akoonka bangiga.
Si sax ah, sababtoo ah way fududahay in la isticmaalo, PayPal ayaa ah kan ugu xiisaha badan ee malaayiin iibiyeyaasha hiwaayadda iyo iibsadaha adduunka oo dhan.
Sidee PayPal Lacagtaa?
Adigoo adeegsanaya dakhliga maaliyadeed, lacagta PayPal waxay faa'iido u tahay adigoo ku amraya boqolkiiba lacagta laguu wareejiyo.
PayPal waa lacag la'aan iibsadaha alaabta. Marka iibsadaha bangiga Paypal uu samaysto, markaa wax kharash ah uma baahnid in uu lacag u diro iibiye. Lacagta ayaa laga soo celiyay kaadhka deynta ama akoonka bangiga, ama labadaba. PayPal ma iibiso iibsadayaasha inay lacag u diraan.
Qiimaha PayPal wuxuu iibinayaa alaab qiimo ah 30% + (1.9% ilaa 2.9%) oo dheeraad ah si loo helo lacag. PayPal waxay kaliya kugu soo dalici doontaa si aad lacag u hesho. Iyadoo la isticmaalayo naqshad dheeri ah, PayPal waxay soo diri doontaa iibiyeyaasha markasta oo ay ka helaan lacagta iibsadaha.
PayPal waxay mararka qaarkood kugula daraan inaad lacag u dirto saaxiib ama xubin qoys. Haddii aad isticmaasho koontadaada bangiga ama lacag bixinta PayPal si aad lacag u dirto, kan wax iibsanaaya ma aha iibiye diiwaangashan oo ku qoran PayPal, markaa wax lacag ah laguma soo diri karo ama helin lacag. Tusaale: u dir 500 doolar oo wiilkaaga ah inta uu ku jiro dugsiga, ama u siinta $ 75 kooxda rukunkaada internetka.
PayPal waxay kuugu dallacaysaa inaad lacag u dirto saaxiibbada ama qoyska oo ka baxsan miisaanka (~ 2% lacag dheeraad ah).
PayPal waxay kuugu dallacaysaa haddii aad lacag u dirto saaxiibbada ama qoyskaaga kaarkaaga deynta.
Miisaaniyad Lacag Lacageed:
Si aad u hesho beddelaad ka yar $ 3000 USD: khidmadu waa 2.9% + $ 0.30 USD.
Si aad u hesho wareejin $ 3000.01 ilaa $ 10,000: lacagta waa 2.5% + $ 0.30 USD.
Si aad u hesho wareejinta $ 10,000.01 illaa $ 100,000: lacagta ayaa ah 2.2% + $ 0.30 USD.
Helitaanka bedelaad ka badan $ 100,000: Mushaharka Lacag bixinta waa 1.9% + $ 0.30 USD.
Sida aad u maleyn karto, iibiyeyaasha akhristayaashu waxay kordhin doonaan qiimaha ay u leeyihiin in ay lacag ka dhigaan kharashka dhinaca dhinacooda PayPal.
Maxaad isticmaali kartaa lacagta PayPal?
Waxaa jira saddex isticmaalo oo waaweyn oo ah PayPal:
Wixii la iibsado hal mar onlineka. Waxaad jeceshahay labo kabood oo eBay ah, tusaale ahaan, ama waxaad rabtaa in aad dalbato mashiinka qaxwada cusub ka iibsashada internetka. PayPal waa bedel wanaagsan oo lagu isticmaalo kaarkaaga deynta, maadaama aad haysan kartid macluumaadka kaarkaaga si aad ugu dhex marsiiso internetka.
Wixii qadarin ah ee ku socda internetka. Haddii aad rabto inaad ku qorto Netflix ama adeeg kale oo internetka ah oo ujro ah oo bixiya bil kasta, markaas PayPal waa doorasho fiican. Xitaa waxaad ka dhigan kartaa PayPal inaad si toos ah uga soo qaadato koontadaada bangiga halkii aad kaadhkaaga amaahda.
Si lacag loogu diro asxaabta ama qoyska. Waxaad u baahan tahay inaad dib u bixiso lacag aad ka heshay jaallahaaga, ama ilmahaagu wuxuu joogaa Australia oo aad u baahan tahay inaad lacag ku wareejiso. PayPal wuu ku wanaagsan yahay macaamiladan waxayna ku yeelan kartaa eber.
Sidaas, Maxay tahay Qabashada Bixinta PayPal?
Sida adeeg kasta oo internetka ah, waxaa jira hoos u dhac, qiimaha lagaa rabo inaad bixiso markaad isticmaasho PayPal.
Heerarka wada-hadalka ee lacagta PayPal waa qaali. Haddii aad tahay Kanada ama Ingriis, tusaale ahaan, oo aad ka iibsato alaab ka soo iibsashada Ameerika, sicirka sarrifka ah ee lacagta PayPal ayaa kaa qaadi doona oo kaliya qarashka badan ee bangiyada, laakiin PayPal ayaa sidoo kale kaa qaadi doona 2% lacag dheeraad ah si aad u bedesho lacagta.
PayPal-du waa mid aad u xasaasi ah oo ku saabsan khatarta khayaanada, waxayna si dhaqso ah u xireysaa xisaab bangi oo mashquul ah haddii ay ka shakiyaan wax kasta oo anshax xumo ah. Tani macnaheedu waa: Haddii PayPal dareemo amniga ama khatarta asturnaanta, waxay xakameyn doontaa lacagtaada oo aysan ku siin fasaxyada ilaa todobaad ilaa aad ka saari karto wixii sheegasho khiyaano ah.
Taageerada telefoonka ee PayPal waxay noqon kartaa miro. Inkasta oo dadka isticmaala badan ay helaan taageero aad u fiican miiska wicitaankooda, dad badan oo kale oo isticmaala ayaa soo sheegaya in ay ka caroodeen la'aanta maqnaanshaha iyo aqoon la'aanta shaqaalaha telefoonka.
PayPal wuu ka qaalisan yahay beddelaad badan: Macaamiisha is-dhaafsiga, tusaale ahaan, wax yar ayaa ka jaban qaar ka mid ah wareejinta xudduudaha.
PayPal waxaa lagu eedeeyay in macaamiisha ay dul-saaraan lacagaha dulsaarka, khidmadaha dambe, iyo lacagaha kale ee yar yar. Iyadoo eedeymahaasi si dhakhso ah loo xalliyay iyadoo dib loo celinayo macaamiisha, tani waa calaamad madow oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee hore ee PayPal.
Sidee Amaanka Loo Siiyaa?
Inkastoo nidaamkuna aanu ahayn 100% oo foolxumo ah, PayPal waxay soo saartey jeegag badan iyo isku dheelitirid nidaamkeeda si loo xajiyo khaladaadka iyo khiyaanada ugu yar. Ma heli doontid hay'ad kale oo maaliyadeed oo internetka ah taas oo ka wanaagsan inay ilaaliso macaamiisheeda marka loo eego PayPal. Xaqiiq ahaan, PayPal waa mid aad u xiisa badan marka ay timaaddo cabsida khayaanada, maadaama ayan ka waaban doonin inay xakameeyaan xisaab ay ku tuhunsan yihiin in ay ku shaqeeyaan khayaano.
PayPal waxaa loo balan qaadayaa khiyaano iyo xatooyo aqoonsi. PayPal waxay dammaanad qaadaysaa 100% ka ilaalinta bixinta lacagaha aan la fasixin ee koontadaada. Si looga caawiyo joojinta khatarta aqoonsiga , macaamil kasta waxaa lagu xaqiijiyaa emailka qofka haysta xisaabta PayPal. Macaamil kasta oo aad rabto inaad khilaafto waxay ku siinaysaa fursad aad ku hesho 24/7 koox ee taageerayaasha falanqeeya kuwaas oo kuu xalin doona dhibaatadaada.
Badeecada eBay sidoo kale waxaa lagu caymisan karaa ilaa $ 1000 iyada oo loo marayo PayPal. Adeeg la yiraahdo "PayPal Buyer Protection" waa qaab kale oo PayPal ay cadeyneyso in iibiyeyaasha qaarkood ay ku kalsoon yihiin.
Kooxda PayPal ee Ka-hortagga Khiyaanada waxay shaqeeyaan 24/7. Isticmaalka qaababka khatarta ah ee casriga ah iyo tiknoolajiyadda horumarsan, kooxda ayaa awood u leh in ay ogaadaan, iyo inta badan saadaaliyaan, waxqabad laga shakiyo si ay u cirib tiraan xatooyada aqoonsiga. Shaqada kaliya ee ka hortagga khiyaanada kooxeed waa inay sameeyaan lacag kasta oo PayPal ah oo ah mid amaan ah oo aan dhib lahayn.
Qaar badan oo kale oo ah lacagaha kale ee PayPal waxay kala saaraan adeegga tartamayaasha. Websiteka PayPal wuxuu xakameynayaa xakameyn dheeraad ah sida caddaynta shixnadda iyo caddaynta bixinta.
Sidee Bixinta Lacagta Bixiya
Waxaad dooran kartaa dheelitirka hadda ama soo bixitaanka si deg deg ah sida habka lacag bixinta.
PayPal waa mid jilicsan, bilawga iyo saaxiibtinimo, iyo awood u leh in ay kordhiso qaabkeedii hore ee mudnaanta gaaban.
Waxaad kaliya u ogolaan kartaa PayPal inay ka noqoto kaadhka amaahda ama koontada bangiga oo keliya markaad iibsato. Marka aad lacag u dirto, PayPal waxay isla markiiba u direysaa lacagaha, kadibna waxay kaashan doonaan bangiga / credit card laba maalmood oo shaqo gudahood. Iyada oo ikhtiyaarkan, ma jirto baahi loo qabo in lagu hayo dheelitirka tooska ah ee PayPal, mana jirto wax lacag ah oo lagu isticmaalo farsamadan.
Waxaad si toos ah ugu wareejin kartaa PayPal, oo lacagtaas ka baxda xisaabta PayPal. Inkasta oo aanad helin dulsaar bangiga leh habkan, waxay ka dhigeysaa mid aad u sahlan in aad kala saarto miisaaniyada aad iibsaneyso ee laga soo bilaabo bangiyada caadiga ah iyo kaarka deynta. Ma jiro wax lacag ah oo lagu isticmaalo farsamadan, sidoo kale.
Sideen Baan Ka Joojiyaa Lacagta Lacagta Lacagta?
Joojinta lacagta PayPal waa sahlan tahay. Maya, toos ugama aha mashiinka bangiga. Taas bedelkeeda, PayPal ayaa kugula xisaabtamaya kaarka deynta ama xisaabtaada bangiga adoo isticmaalaya nooca xawaaraha. Marka lacagta laguugu wareejiyo akoonkaaga bangiga, ka dibna waad ka noqon kartaa lacago kale. Inkastoo this 'PayPal' withdrawal 'wax kharash ah ma laha, waxay qaadan kartaa illaa 8 maalmo shaqo oo loogu talagalay bedelka bangiga PayPal-ilaa-bangiga si aad u buuxiso.
Sida loo Sameeyo Koontada "PayPal Account"
Waxaad billaabi kartaa xisaab cusub PayPal daqiiqado gudahood. Baaritaanka deynta bilowga hore ayaa horeyba loo qabtay shirkadda kaarka deynta iyo bangigaaga; Hadda waxaad u baahan tahay kaliya inaad hesho PayPal si aad uhesho macluumaadkaas cinwaanka emailkaaga.
Cinwaanka email sax ah oo lagu kalsoon yahay.
Kaarka deynta oo sax ah iyo
Waa xisaab bangi oo ansax ah oo ka mid ah 100ka dal ee PayPal
Qoraalka Sii Lacag Bixinta 1: Waxaad gali kartaa kaadhadhka amaahda badan iyo xisaab bangi si loo isticmaalo ilahaaga lacag bixinta. Inkastoo mid ka mid ah ilaha maaliyadeed oo kaliya loo qoondeeyey sida hoose , waxaad u qoondeyn kartaa lacagahaaga mid ka mid ah ilahaaga wakhti kasta.
Wargelinta Bixinta Lacag bixinta 2: Markaad soo dirto lacag bixinta PayPal, PayPal waxay kaashan doontaa ilahaaga asaasiga ah ee maalgalinta laba maalmo shaqo gudahood. Haddii aad ka badan tahay xadiga deynta ee la heli karo, Paypal waxay isku dayi doontaa deyn labaad oo ah maalmo ganacsi oo kale.
Doorashada Nooca Xisaabtaada PayPal
Xulashada 1: Lacagta Lacagta ah ee PayPal
Kani waa xisaabta PayPal aasaasiga ah oo kuu ogolaanaya inaad bixiso kharashka eBay ee sahlan. Waxaad u isticmaali kartaa inaad dirto oo aad hesho lacag. Waxaad lacag u diri kartaa qof kasta oo leh cinwaan emayl ah 55 dal iyo gobollo. Koontada shakhsiyeed waxay xitaa kuu ogolaanaysaa inaad aqbasho lacag-bixinnada haddii aad wax iibiso eBay. Qabashada: waxaad kaliya aqbali kartaa lacag bixinta xisaabaadka kale ee PayPal, mana aqbal kartid lacagaha kaarka amaahda ama kaarka debit.
Ma jirto wax khidmad ah xisaabta Shakhsi ahaaneed ama macaamilka aad ka sameysey. Hase yeeshee, waxaa jira xaddidaad ah inta lagugu siin karo bil kasta. Haddii aad qorsheyneyso inaad iibiso alaab aad u sareysa, xisaabta Shakhsi ahaaneed waxay noqon kartaa mid xaddidan.
Doorashada 2: Koontada Ganacsi ee PayPal
Tani waa fasalka ganacsiga ee xisaabta PayPal, ugu fiican ee ku shaqeeya shakhsiyaadka ku socda ganacsiga internetka ama dukaanka internetka. Koontada ganacsigu waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku shaqeysid magaca ganacsigaaga, oo u adeegso Warbixinta iyo eBay Tools iyada oo aysan jirin xayiraad ku saabsan cabbirka macaamilka. Waa xulashada ugu fiican haddii aad ka filaneyso Xisaabin Bixin ah oo kakan. Waxaa jira adeegyo ballaadhan oo loogu talagalay mulkiilayaasha ganacsiga kuwaas oo ka caawiya inay ku maareeyaan iibka aadka u badan ee sahlan.
Sida Premier, waxaa jira adeegyo ikhtiyaari ah oo leh khidmadaha la kala dooran karo, laakiin xisaabta Premier ee aasaasiga ah waa bilaash in la abuuro, la qabto, iyo lacag u diro; fadlan ka eeg faahfaahinta bogga shabakada PayPal. Habka dejinta ee xisaabta Ganacsiga waxay la mid tahay tan xisaabta Premier. Haddii aad hadda isticmaasho koontada Shakhsi ahaaneed ama Premier, waxaad u-beddeli kartaa Ganacsiga.
Sidee baan u diraa ama u bedelaa lacag bixinta?
Sida hay'ad kasta oo bangi oo internetka ah, PayPal waxay runtii ka dhigtay mid sahlan oo fudud sida mid filan karo.
Lacag iibsashada eBay badankood
Inta badan dalabka eBay waxay leeyihiin 'Pay Now' ama 'Send Payment' link directly to bogga eBay ee su'aasha ah. Haddii aad raacdo isku-xirkan, PayPal waxay buuxin doontaa faahfaahinta iibiyaha iyo lambarka aqoonsiga xaraashka ah. Inta badan, waxay sidoo kale buuxin doontaa macluumaadka S & H sidoo kale. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa kugeli kartaa lambarka sirta ah ee PayPal iyo cinwaanka emailkaaga, iyo inaad xaqiijiso in cinwaanka maraakiibtaada iyo ilaha dhaqaale ee asaasiga ah ay sax yihiin. Waxaad ku dartaa waraaqo dheeraad ah ee iibiyaha (tusaale ahaan ' fadlan dir mareegta US Post '), isla markiiba waa la bedelayaa lacagta. E-mail xaqiijin ayaa laguu soo diri doonaa, kaddibna bangigaaga / amaahdaada deynta ayaa laguugu soo baxayaa laba maalmood gudahood.
Lacag u dir Cinwaanka E-mail-ga Recipient
Si aad u heshid xawilaad shakhsiyeed, waxaad toos ula xiriirtaa shabakada Paypal oo guji lacagta. Waxaad gali kartaa lambarkaaga sirta ah, ka dibna nuqul ka samee cinwaanka emailka alaab-qeybiyaha ee foomka lacagta ee dirista. Waxaad u baahan doontaa inaad ku darto faahfaahinta macaamil ganacsi, laakiin habka waa mid sahlan. Mar labaad, macluumaadkaaga bangiga shakhsiga ah mar walba waa laga qariyaa iibsadaha.
Ku shaqeynta Cabirka Ethernet Cabsida dibadda
Waa Maxay "Protocol"?
SAN Faahfaahin - Kaydinta (ama Nidaamka) Nidaamka Goobta
Waa maxay Cyberlocker? Maxay Sababtoo ah Khilaaf?
TeamSpeak DJ: Sida Loo Toqdo Musikada ee Teamspeak 3
Waa maxay waxa dhab ahaantii lagu falanqeeyay shabakad isku xirka
AT & T si loo yareeyo isticmaalka internetka ee DSL iyo U-line
Sheekadu waxay dabagalaysaa xargaha batroolka CAT5 iyo Qaybta 5 Ethernet
Maxay Tahay Kabuubis?
Taliyaha 1aad: Tom's Mac Software Pick
HTC Vive: Fiiri HTC Khadka Product Reality Product
Isticmaalida Xiriirada si loo Abuuro Maqaalada Haqabalka ah
IOS: Sida Loo-shaqeeyaha Apple iyo Xirfadaha Xirfadaha ayaa kaa dhigi kara wax soo saar badan
Sony Alpha 6300 Dib u eegis
Talooyin Qalabka Xbox Console System iyo Tricks
9 Barnaamijyada Barnaamijka Free Software Converter
Barnaamijka ugu wanaagsan 8-da ee TV-ga
Windows Live Hotmail Settings SMTP
Email Tilmaamaha iyo Faahfaahinta
Dib-u-eegid: HiFiMan HE-400i Qalabka Wareejinta Magnetic-ka
Sidee loo rogaa Dukumiintiyada Isticmaalka Qalabka Laydhka ah ee Galka iyo Qorista
10ka Wii Ujeedo ee ugu Wanaagsan ee loogu talagalay 2015
Sida Loo Horumariyo Boggaaga Facebook ee Bilaash ah
IClever Adapters Bluetooth Universal ayaa ku jawaabay
Is-beddelaadaha Casriga ah - Fiiri Block Songs
Muujinaya Sawir ah Microsoft Word
Amarada Taleefanka ee Ammaanka Windows Vista
Xatooyo Xoog Leh San Andreas Cheat Code for PS2
17 Barnaamijyada Uninstaller Free